Iindaba - Amabali amathathu anomdla ku "Ukuzigcina Ucocekile"
1.I-lichee entsha kunye ne-yang yuhuan kwi-Tang Dynasty
"Ukubona ihashe liphuma libaleka endleleni, ishweshwe likakumkani lancuma ngolonwabo; akukho mntu ngaphandle kwakhe wayesazi ukuba uLichee uyeza."
Imigca emibini eyaziwayo ivela kwimbongi eyaziwayo kwindlu yaseTang, echaza elona shweshwe lithandwayo likakumkani ogama linguYang yuhuan kunye nesiqhamo salo esithandwayo uLichee.
Indlela yokuhambisa ilitshi entsha kwiiHan naseTang Dynasties irekhodwe kwiiNcwadi zeMbali zeLitchi kwiHan naseTang Dynasties kwi- “Fresh Lichee Delivery”, kunye namasebe kunye namagqabi, ibhola yetshisi esongelwe ngephepha elimanzi loqalo kububanzi obukhulu (ngaphezulu kwe-10 cm) bamboo emva koko butywinwe nge-wax. Emva kwehashe elikhawulezayo elibaleka imini nobusuku ngaphandle kokuma ukusuka emazantsi ukuya emantla-ntshona, iLichee isemtsha ngoku. Ukuthuthwa kwe-800-li kweelchees yeyona ndlela yokuqala yezothutho ebandayo.
2. Ubukhosi beMing-hilsa herring Delivery
Kuyatshiwo ukuba kubukhosi bethu be-Ming kunye ne-Qing kunye namakomkhulu eBeijing, abalawuli babekuthanda ukutya uhlobo lweentlanzi ekuthiwa yi-hilsa herring. Ingxaki yelo xesha yayikukuba iintlanzi zazivela kuMlambo iYangtze, kumawakawaka eekhilomitha ukusuka eBeijing, kwaye ukongeza, i-hilsa herring yayithambile kwaye kulula ukuba ife. Abalawuli banokuyitya njani i-shad entsha eBeijing? Indlela yakudala yokuhanjiswa kwempahla ebandayo iyanceda!
Ngokweengxelo zembali, "isinqatha sehagu esityebileyo kunye nomkhenkce zenza ugcino olulungileyo" .Ngaphambi koko, babila umgqomo omkhulu weoyile yeoli, emva koko xa ipholile phambi kokuqiniswa, babamba nje isithunzi esitsha kumgqomo weoyile. Xa i-oli yeoli yaqina, yayithintela iintlanzi kwigama langaphandle, elilingana nokupakishwa kwe-vacuum, ukuze iintlanzi zisebatsha njengoko befika eBeijing ngokukhwela ngokukhawuleza, imini nobusuku.
3. Ubukhosi beQing - iLichee yokuTyala iMigqomo
Imbali ithi uMlawuli uYongzheng naye wayeyithanda ilitshi. Ukulungiselela ukuthanda umlawuli, uMan Bao, owayengu rhuluneli wase Fujian nase Zhejiang, wayehlala ethumela ubuchule base Yongzheng. Ukuze agcine i-litchi zintsha, weza nombono okrelekrele.
UManbao ubhalele i-Emperor Yongzheng ileta, esithi, "I-Litchi iveliswa kwiPhondo laseFujian. Eminye imithi emincinci ityalwe kwimigqomo. Abantu abaninzi bane-litchi emakhayeni abo, kodwa incasa yayo ayikho ngaphantsi kwale ye-litchi eveliswa yimithi emikhulu. Imithi emincinci ingafikelela lula eBeijing ngesikhephe, kwaye amagosa ayithuthayo akufuneki asebenze nzima kakhulu. ...... ngo-Epreli, imithi ye-litchi yokutyala imigqomo izakuthunyelwa kwangoko ngephenyane eBeijing. -Uhambo lwenyanga ngo-Epreli nango-Meyi, banokufikelela kwikomkhulu ekuqaleni kukaJuni, xa iilitshi zivuthiwe ukuba zingcamle. "
Yayingumbono oqaqambileyo. Endaweni yokunika nje iilayiti, wathumela umthi otyalwe emgqonyeni owawusele uvelise ii-lyche.
Ngokuphuculwa komgangatho wobomi bethu kunye nokusebenziseka okulula kwe-e-shishini okuzisiweyo, ubucukubhede bezixhobo ezibandayo budlala indima ebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla. Ngoku kuyafikeleleka ukuhambisa iziqhamo kunye nokutya kwaselwandle kwiintsuku ezimbini e-China.